अनलाइन वा फोनबाटै दशैं तिहारको आशिर्वाद लिन आग्रह - Aarsha Khabar
अनलाइन वा फोनबाटै दशैं तिहारको आशिर्वाद लिन आग्रह
by Aarsha Khabar २३ आश्विन २०७७, शुक्रबार
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) संक्रमितको संख्या १ लाख नाघेको छ । शुक्रबार थप २ हजार ५९ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या १ लाख ६ सय ७६ पुगेको छ । शुक्रबार १३ हजार २ सय ७९ पीसीआर परीक्षण भएकोमा महिला ७ सय ३२ र पुरुष १ हजार ३ सय २७ जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । काठमाडौंमा १ हजार १ सय १६, भक्तपुरमा १ सय ३० र ललितपुर १ सय ६३ जना गरी उपत्यकामा १ हजार ४ सय ९ जना संक्रमित थपिएका छन् ।
यसैगरी कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ६ सय पुगेको छ । कोरोनाबाट थप १० जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या ६ सय पुगेको हो । का मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले काठमाडौंमा ८७ वर्षीया एक महिला सहित १० जनाको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा झापाका २९ र ५२ वर्षीय पुरुष, सुनसरीका ४६, ५२ र ६८ वर्षिय पुरुष रहेका छन् ।
यस्तै काठमाडौंका ७१ वर्षीय, ललितपुरका ८४ वर्षीय, रुपन्देहीका ४७ वर्षीय र ८४ वर्षीय पुरुष रहेका छन । देशभरी सक्रिय संक्रमितको संख्या २७ हजार ५३ रहेको छ ।
संस्थागत आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर १ मा ८ सय ७७, प्रदेश नम्बर २ मा ४ सय ५८, बागमती प्रदेशमा ७ हजार ६ सय ३४, गण्डकी प्रदेशमा ४ सय ४६ जना रहेका छन । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा ११ सय ८, कर्णाली प्रदेशमा ४ सय २६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ सय ७ गरी देशभरी ११ हजार १ सय ७६ संक्रमित संस्थागत आइसोलसनमा रहेका छन् ।
यसैगरी होम आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर १ मा २ हजार २४, प्रदेश नम्बर २ मा ५ सय ३, बागमती प्रदेशमा १० हजार ५ सय १२ र गण्डकी प्रदेशमा ५ सय ६५ जना रहेका छन् । त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार ४ सय १३, कर्णाली प्रदेशमा ३ सय ६४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ सय ९६ जना गरी देशभरी १५ हजार ८ सय ७७ जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् ।
शुक्रबार १ हजार ६ सय ८० जना डिस्चार्ज भएका छन । अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर १ मा ६ हजार ३ सय ३७, प्रदेश नम्बर २ मा १४ हजार ९ सय ८१, बागमती प्रदेशमा २६ हजार ४ सय ८७ र गण्डकी प्रदेशमा ४ हजार ७८ डिस्चार्ज भएका छन् भने लुम्बिनी प्रदेशमा १० हजार ३ सय ९२, कर्णाली प्रदेशमा ३ हजार ३ सय ५० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ हजार ३ सय ९८ गरी देशभरी ७३ हजार ३२ जना डिस्चार्ज भएका छन् ।
मन्त्रालयले कोरोना पोजेटिभ भएका व्यक्तिहरु बाहिर हिडडुल गरेको पाइए ६ महिनासम्म जेल सजाय हुने बताएको छ । संक्रामक रोग ऐन अनुसार पोजेटिभ देखिएमा ६ महिनाको जेल सजाय हुने प्रवक्ता डा. गौतमले बताउनुभयो । यसका लागि अनुगमनमा सहयोग गर्न घर परिवार र छिमेकीलाई मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । कारवाहीका लागि गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सूचना दिइएको छ ।
दशैं तिहारमा भिडभाड नगर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । अनलाइन वा फोनबाट नै यो वर्षको दशैं तिहारमा आशिर्वाद लिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
धरहरा पुनर्निर्माणको समय थप
७१.५ प्रतिशत संक्रमित कोरोनामुक्त, मंगलबार थप १४५९ जना संक्रमित
Aarsha Khabar September 15, 2020
स्वास्थ्य मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारी : तथ्यांक गलत भन्दै कोरोना संक्रमितको संख्या घटायो
Aarsha Khabar May 14, 2020 May 14, 2020
डेंगु रोगबाट बच्न सूचना प्रवाहको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश’
Aarsha Khabar September 16, 2019